Izisekelo ezi-9 ezihamba phambili zePowder zeMatte Finish - Ubuhle
Izisekelo ze-Powder ze-9 Ezingashiyi Isikhumba Sakho I-Mess Dry, Chalky Mess
9 Powder Foundations That Won T Leave Your Skin Dry
Gasp! Ngabe zingaphela izinsuku zesikhumba esikhanyayo, esinamazolo? Ungahambi ulahla zonke izigqamisi zakho nezisekelo zikawoyela okwamanje, kodwa isiphetho se-matte esibushelelezi kuyinto ukwenza ukubuya okukhulu. Futhi uma ngikhuluma iqiniso, i-T-zone yethu enamafutha ikhona lapha kuyo. Ngokuphambene nenkolelo evamile, isisekelo se-powder akudingeki sisho isiphetho esomile, esinechalky. Isibonelo: Lezi zisekelo eziyisishiyagalolunye ze-powder-kusuka ekukhanyeni kuya ekugcwalisweni okuphelele-zinakho konke ukukhanya-okulwa, izithako ezisabalalisa ukukhanya kokuhle kwemihlaba yomibili.
OKUSHIWO: Lezi Izinketho ze-Makeup Remover Best
1. Okuhamba phambili Ngokuphelele: I-BareMinerals Original Foundation Broad Spectrum SPF 15
Le mpuphu yamaminerali evulekile ibilokhu ikhona ngenxa yalokho okubonakala kunguna phakade, futhi ngesizathu esihle. Abantu abakwazi ukuthola okwanele-kuyaqhubeka njengokhilimu bese kuyancibilika esikhunjeni sakho ngakho-ke awuqapheli ukuthi ikhona. Akukho cakiness, no feel heavy and zero white cast, kanye nakho konke ukumbozwa okwakhayo, okusula isikhubekiso nokusilele okufihlekile okufisayo ngezithako ezinhlanu nje. Umhleli wePureWow uRoberta Fiorito akakaze asebenzise enye into eminyakeni eyisithupha. Uthi, ngine-T-zone enamafutha kakhulu, ngakho-ke noma yini ewuketshezi igcina ibukeka icwebezela emini. Ngine-BareMinerals, ngizizwa kahle ngalokhu engikufaka esikhunjeni sami futhi angikaze ngizizwe nginamafutha noma ngicwebezela kuze kube cishe amahora ayi-12 (futhi ngalelo phuzu, ngethemba ngikhumula izimonyo zami vele). Ukumbozwa kuhle kodwa futhi kuvumela ithoni lomnqumo wesikhumba sami ukuthi likhanye ngaphandle kokuthi ngibukeke njengamakhekhe noma sengathi ngigqoke imaski.
Ithenge ($ 31)
ISaks Fifth Avenue
2. Okuhamba phambili ngokuKhanya okuKhanyayo: I-MAC Studio Fix Powder Plus Foundation
Awufuni ukumboza amabala akho amnandi? Zama lesi sisekelo se-powder-classic powder. Iqhubeka njenge-velvet futhi ifiphaze ukungapheleli, konke ngaphandle kokwenza isikhumba sakho sivele futhi ibhulashi lomoya ngenxa yefomula yayo engasindi, eyakhekayo.
3. Okuhamba phambili ngokumbozwa okugcwele: I-Wander Beauty Wanderlust Powder Foundation
Lesi sisekelo sidumile ku-Instagram, ngakho-ke sisivivinya. Futhi mfana, ngabe kuhambisile. Ayigcini nje ngokumunca uwoyela owedlulele nokulwa okukhanyayo usuku lonke, ibuye iphuze ngenhlanganisela yezithako ezithambisa njenge-aloe ne-hibiscus. Okusho ukuthi awukho umbala owomile, onshaka-nje ongenasici, noma oyisisekelo noma ngabe ufaka izingqimba ezingaki.
4. I-SPF ehamba phambili: I-Colorescience Brush On Foundation SPF 20
Masibe ngokoqobo: Asikhumbuli njalo ukushelela esikrinini selanga ngaphambi kokufaka izimonyo. Yingakho sithande lesi sisekelo se-SPF 20 se-powder esingasetshenziswa kalula usuku lonke ngaphandle kokugcoba ukugqama kwakho okuphelele ebusweni bakho bonke. Yize ukumbozwa kukhanya ngokulingene, kusenayo i-oomph eyanele ukugcina noma yikuphi ukubomvu kusheke ekuvezeni ilanga izolo.
Ithenge ($ 55)
5.Kulungele iSikhumba Esibucayi: ILily Lolo Mineral Foundation SPF 15
Uma isikhumba sakho sicasulwa kalula, ukufakwa esisekelweni mhlawumbe akulona ilungelo lakho. Kepha noma yini enesisisekelo samaminerali inkulu, ngenxa yohlu lwayo lwezithako ezinomkhawulo (lena inezine nje), eyehlisa ingozi yakho kunoma ikuphi ukusabela kokungezwani komzimba. Le fomula ingukufa kwethu ngoba ihlala usuku lonke futhi ayibukeki iyisicaba, ngenxa yokwengezwa okukhanyayo kwemica ekhombisa ukukhanya.
Ithenge ($ 22)
6. I-Luxe ehamba phambili: I-Chanel Le Teint Ultra Tenue Ultrawear Flawless Compact Foundation
Abahleli bodwa kepha abahleli bePureWow babili abathi lezi zinto njengezisekelo zabo eziyintandokazi ekugcineni. Umhleli wemfashini uDena Silver uthi, ngigqoka lokhu phezu kwe-liquid foundation ngoba ngiyahlanya. Kepha futhi ngoba ngiyakuthanda ukuthi kususa ukucwebezela ngokweqile ngaphandle kokuzwa ikhekhe. Futhi i-VP yokusebenza uLauren Gniazdowski uyavuma: Kuyafana. I-cosign ngokuphelele. Futhi, isiponji esisebenzisekayo nesibuko kwenza ukuthinta ekuhambeni kube nomoya ophelele.
7. Isitolo Sezidakamizwa Esihamba Phambili: IMaybelline SuperStay Full Coverage Powder Foundation
Kepha isisekelo sesitolo sezidakamizwa esingu- $ 12 singathola kanjani ukubuyekezwa okunje? ubuza. Kholwa, ngoba le nto igolide elimsulwa ngokusho kokubuyekezwa okungaphezulu kwe-900 kuwebhusayithi kaMaybelline. Ukumbozwa okugcwele ngaphandle kokuba nekhekhe, kufiphaza ukungapheleli ngaphandle kokuzwa sengathi ugqoke imaski futhi kuza nesiponji nesibuko sokuthinta ngemuva kokudla-konke ngentengo yesaladi eyodwa yesilinganiso.
Ithenge ($ 12)
8.Kulungele Isikhumba Esomile: Ukubhekana Nakho Okuzelwe Ngale Ndlela Okungatholakali Okuphakathi Okugcwele-kuya-Okugcwele Okuphambili Powder Foundation
Khohlwa konke okutshelwe: Isisekelo se-Powder akusona isitha esibi kakhulu sesikhumba. Hhayi le fomula enkulu yokuhambisa amanzi noma kunjalo. Yenziwe ngezithako ezinjengamanzi kakhukhunathi kanye ne-hyaluronic acid, iletha iveli lokumboza elingatholakali elingeke ligcizelele iziqeshana ezomile noma libangele ezinye zazo. Omunye umbuyekezi uyachaza, ngihlala kude nemikhiqizo yempuphu ngoba ngijwayele ukuba nesikhumba esomile futhi ngihlala esimweni sezulu esome kakhulu… [lo mkhiqizo] awugcizelelanga noma yikuphi ukoma futhi unginike ukubukeka okungenaphutha ebengikufuna.
9. Okuhamba phambili esikhunjeni Esinamafutha: I-Estée Lauder Double Wear Hlala Endaweni Matte Powder Foundation
Isisekelo se-Powder sikhanyisa ngokuncipha, kepha le fomula ethile ibamba uwoyela oweqile futhi iyivimbele ekudaleni leyo ndawo ebukeka isatshwa kakhulu eT. Futhi, yifomula eguquguqukayo kunazo zonke esiyitholile: Uhlangothi lwesiponji lomfakisicelo ofakiwe lunikeza ukumbozwa okugcwele, kanti uhlangothi lwe-velvety luhlinzeka ngokuphakathi. Noma hamba unamandla futhi umanzise umfakisicelo ukuze ambozwe ngokuphelele. Win, win, win.
OKUSHIWO: Lesi Sethi Sebhulashi se- $ 11 Sinokubuyekezwa Okungaphezulu Kwezingu-7,000 ku-Amazon
usuku lokugcina kuzilinganiso zesikole
uhlu lwamafilimu omndeni ka-2010
imikhiqizo yezinwele ehamba phambili yezinwele ezilimele
isitayela se-priyanka chopra esivamile